Dhameystirka Hal Tababar oo Tababar ah, & Billowga Xiga! - Gargaarka Musiibada ee Gargaarka
Dhameystirka Hal Tababar oo Tababar ah, & Bilowga Kan Dambe!
Bogga ugu weyn/updates/Dhameystirka Hal Tababar oo Tababar ah, & Bilowga Kan Dambe!
Aad ayaan ugu faraxsanahay inaanu shaacino mashruuceena tijaabada ah, Dhisidda Dhaqdhaqaaqa Tababbarka Tababbarka Mutual, wuxuu ahaa guul weyn gugii 2018 - aad iyo aad baan u xiiseyneynaa inaan mid kale iskudarsanno Dhicida 2018! Haddii aad xiiseyneyso inaad martigeliso tababar, fiiri xiriiriyeyaasha hoose.
Gugaan waxaan booqannay in kabadan 30 beel, miyi iyo magaalo, 12 gobol oo dhexmara bioregions kaladuwan, waxbadan ayaan ka baranay masiibooyinka sida kaladuwan ee duufaanada, duufaanta, iyo shilalka kiimikada ee dhuumaha, cadaanka-sarreynta, iyo sharafta. Waxaan la kulannay caqabado cabsi leh, laakiin waan adkeysanay oo aan ka wada shaqeynay si aan xal u helno - taasi waa waxa aan sameyno, sax? - Waxaan aad ugu mahadnaqaynaa qof kasta oo quudiya, hoy, oo naga daryeela safarkaan xiisaha badan!
Waxay ahayd waayo-aragnimo awood leh inaan si ula-kac ah ugu xirno shabakaddeenna. Waxaan si qoto dheer u dhex galnay cilaaqaadka jira, waxaan bilownay inaan abuureyno fursado cusub oo xiiso leh, waxaan saameyn saameyn ku leh ku sameynay mashaariicda maxalliga ah sidoo kale, anagoo adeegsaneyna kheyraadkeena iyo waqtigii firaaqada ahaa ee aan ugu raraneyno dhismeyaasha tuubooyinka xero go'an ee gobolka Minnesota, si aan u helno waraaqo qallalan oo oday ah Baahida dayactirka guryaha ee New Orleans, iyo in la bixiyo xirmooyinka daawada bilowga ah Kooxda Jawaabta Wolfpack Gunshot ee Cleveland. Waxaan sidoo kale caawinay Difaacayaasha Biyaha ee la dagaallamaya Buundada Bayou Bridge ee Xerada L'eau Est La Vie gudaha Louisiana, waxayna la mudaharaadeen dadkii deganaa xaafada Flint iyaga oo ka soo horjeeday xirnaashaha gobolka ee qeybinta biyaha dhalada ah ee bilaashka ah iyadoo Nestle u ogolaaneysa inay laba jibaarto xatooyada khayraadka biyaha ee Michigan. Waxaan hadda ka shaqeyneynaa xirmo manhaj ah si aan dhammaantiin awood ugu siino inaad naftiinna u tababartaan - indhahaaga u fur furitaanka soo socda!
Intii lagu gudajiray, waan helnay xitaa more codsiyada tababarka, iyo tan fikradaha wanaagsan ee dabagalka iyo sii wadida wadaagga xirfadda. Marka kaliya ma ballanno a SOO SAARO Galbeedka, laakiin sidoo kale si tartiib tartiib ah ayey u kordhineysaa awooddeena oo u diyaarisaa shabakadeena mid socda XARUNTA TABABARKA TARJUMADA - kulligeen waxaan leenahay xirfado aan wadaagno, iyo inbadan oo aan midba midka kale ka baranno! Haddii aad jeceshahay inaad ka codsato booqashada kooxdayada tababarka "tijaabada-mashruuca", ama iskaa wax u qabso ku siinta tababaro xirfado kasta oo aad jeceshahay inaad wadaagto, isticmaal xiriiriyahan:
** Si aad u codsato booqasho bulshadaada, isticmaal foomkan.
[waxaan dooneynaa inaan booqano ilaa 10 gobol galbeedka Mississippi, laakiin wadadeena saxda ah wali way u furan tahay meelkasta oo aan dan ka leenahay - hadaanan la imaan bulshadaada markan, waxaan qorsheyneynaa safaro goboleedyo badan sanadka 2019]
** Si aad ula wadaagto xirfadahaaga bulshooyinka kale, isticmaal foomkan.
[wali ma hayno qorshe aan ku fulino tababaro dabagal ah, kaliya dano badan iyo raynrayn - fadlan samir… ama ka sii wanaagsan, iskaa wax u qabso ku biir kooxda tababarka ee tababarka oo naga caawi sidii aan himiladan xiisaha leh uga dhabeyn lahayn!]
** Haddii aad leedahay tababarro ama xirfado fududeyn, jacayl safar, iyo wakhti firaaqo ah Agoosto-Nofeembar, waxaa laga yaabaa inaan u baahanahay tababarayaal dheeraad ah oo socdaalkan ah, iyo hubaal safarrada gobollada ee mustaqbalka. Fadlan toos wax ugu qor [emailka waa la ilaaliyay] waayo info dheeraad ah.
Ama, si aad ula xiriirto kuwa kale ee la halgamaya maaddooyin isku isla xilligan, waxaa jira a “Kulan Xiisad Leh” gudaha Newark, New Jersey, July 13-15. Dadka ku lugta leh Occupy Sandy iyo dalal kale oo badan oo maxalliga ah oo ka kala yimid daafaha dalka ayaa la wadaagi doona xirfadaha iyo casharrada la bartay, waxay tixgelin doonaan qaabab si si kas ah loogu kasbado caddaalad iyo cadaalad iyadoo loo marayo ka jawaab celinta mashaakilaadka casriga ah, waxayna dhisi doonaan ilo lagu taageerayo shaqadan.
** Si aad isaga diiwaangeliso Xiisada Cilmiga, isticmaal foomkan.
[waqtiga kama dambaysta ah ayaa soo dhowaanaya - Samee! Haddadaan! Way fiicnaan doontaa 🙂]
Waxaan rajeyneynaa inaan dhowaan kula soo xiriirno, maadaama aan sii wadno dhisidda xiriirro xoogan iyo isku xirnaan dhexmara bulshooyinkeenna xoogga, adkeysiga, iyo waara.
Tyler iyo Kooxda Tababbarka MADRelief
@weststreetrecovery ayaa u dabaaldegaya saddex sano oo ah
Waxaan ka helnay xirmo daryeel qurux badan @birminghammu
Ma leedahay koox isku xidhan? Marar badan waa o
“Ururada Grassroots ee ku baahsan Gobolka Lane oo dhan